Kuzoguga utshani kuqhuthulana izimbangi ezindala - Impempe
Kuzoguga utshani kuqhuthulana izimbangi ezindala
Umdlalo weVodacom Bulls neCell C Sharks uthathwa njengempinda yowamanqamu weCurrie Cup lapho kuwine khona iqembu laseGoli ngesizini edlule.
La maqembu okuyiwona asashaye into ecokeme kwiRainbow Cup SA azotholana phezulu emdlalweni obhekwe ngabomvu eLoftus Stadium ngoMgqibelo ngo-6.15 ntambama. ISharks izoya kulo mdlalo ingalishintshile kakhulu iqembu njengoba kunoshintsho olulodwa kuphela.
UJaden Hendrikse uzoqala umdlalo endaweni kaGrant Williams kwi-scrumhalf, kanti uSanele Nohamba uzoqala ebhentshini. ISharks iya kulo mdlalo iqhwakele kwilogi njengoba ithole amaphuzu ebhonasi amabili ngesikhathi iwina kwiDHL Stormers ne-Emirates Lions emidlalweni emibili edlule.
“Ngenkululeko esiyinikwayo ukuthi sidlale, ukuthatha izinqumo yikona okubaluleke kakhulu. Lokho kusho ukuthi sazi ukuthi kumele sigijime nini nokuthi kufanele sikhahl ele nini. Uma sibeka lokho emqondweni nginethemba lokuthi sizoba nomdlalo omuhle kule mpelasonto,” kusho uCurwin Bosch odlala kunombolo 10 kwiSharks.
Komunye umdlalo weRainbow Cup ngempelasonto kuzotholana phezulu iLions neStormers e-Emirates Airlines Park ngo-1.30 ngawo uMgqibelo.
Iqembu leSharks libophele kanje kule mpeasonto: 1. Ox Nche, 2 Fez Mbatha, 3. Thomas Du Toit, 4, Ruben van Heerde, 5. Renile Hugo, 6. Siyamthanda Kolisi, 7. Henko Venter, 8. Sikhumbuzo Notshe, 9. Jaden Hendrikse, 10. Curwin Bosch, 11. Yaw Penxe, 12. Jeremy Ward, 13. Lukhanyo Am (ukaputeni), 14. Sbu Nkosi, 15. Aphelele Fassi
Embentshini: 16. Kerron van Vuuren, 17. Ntuthuko Mchunu, 18. Wiehan Herbst, 19. Le Roux Roets, 20. Phepsi Buthelezi, 21. Sanele Nohamba, 22. Manie Libbok, 23, Werner Kok
Previous Previous post: Injabulo kuZinnbauer kubuya onozinti kwiBucs
Next Next post: Uyifunde ezinkundleni zokuxhumana iSimba abazodlala nayo oweChiefs